Xildhibaanada mooshinka oo sheegay in saddex arrin uusan Farmaajo sameyn karin dalkana ka bixi karin - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaanada mooshinka oo sheegay in saddex arrin uusan Farmaajo sameyn karin dalkana...
Xildhibaanada mooshinka oo sheegay in saddex arrin uusan Farmaajo sameyn karin dalkana ka bixi karin
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaanada mooshinka xilka-qaadista ka keenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray go’aan xasaasi ah oo u muuqda inay isku dayayaan inay xakameeyaan awoodda madaxweynaha.
Xildhibaanadan ayaa soo saaray qoraal ay ku baaqayaana rrimo uusan madaxweynaha sameyn karin inta uu socdo mooshinka, oo go’aan laga gaarayo. Qoraalka oo facebook soo dhigay Mahad Salad ayay ku sheegeen in madaxweynaha:
1 – Inuu u hoggaansamo dastuurka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
2 – Inta mooshinka xilka-qaadista ee xildhibaanadu soo gudbiyeen Barlamaanku uga codaynayaan in uusan sameyn karin qodobada soo socda:
a) – In wax heshiis ah uusan geli karin.
b) – In uusan qofna magacaabi karin xilna ka qaadi karin.
c) – In uusan dalka ka bixi karin inta dacwadaadu dhinac uga dhacayso.
Qodobadan ayaa u muuqda kuwa kasii daraya xaaladda dalka, hase yeeshee ma cadda cid fulin karta ama fulin doonta dalabka xildhibaanada mucaaradka ah.